Umhla My Pet » Ngaba Ukuthandana Online Kukhetho Omhle Kuwe?
ukubuyekezwa: Jan. 22 2021 | 3 min ukufunda
ukuthandana kwikhompyutha iye ngokukhawuleza babe ukhetho kwinombolo enye uphuhlisa ukuhlangabezana abantu ukuba umhla. Ishishini ukuthandana intanethi iye baqhubeka besanda popularity and banesizathu. Ukuba phezu kocingo malunga nokuba ukuzama phandle intanethi ndithandana njengendlela yokufumana romance, ingqalelo ezi zizathu ezintlanu ezintle kutheni usebenzisa inkonzo ukuthandana online ube ukhetho entle kuwe.
Umntu ongatshatanga kusetyenziswa inkonzo ukuthandana intanethi ukhetho olungcono yematshisi kunokuba elinye usebenzisa iindlela ukuthandana zemveli ifana bar okanye ikofu venkile. Ukuthandana intanethi uvunyelwe uphengulule iinkangeleko ezininzi ekhangela ukuba nomntu. Xa intloko kwikona coffee shop kufuneka nje nethuba intlanganiso Bambalwa abantu abangatshatanga, amaxesha kwaye ungaze waqubisana nomntu konke konke. Ukuthandana intanethi ubandisile kakhulu amathuba akho okufumana omnye umntu umdla.
2. Fumana into oyifunayo
iinkonzo ezininzi ukuthandana intanethi kuvumela ukuba yokuphendla profiles ngokusekelwe namabinzana athile isitshixo okanye ngokusebenzisa inkqubo ucoco. Ngokukhangela kuphela iprofayile elithi “ngumKristu” okanye “fan zemidlalo” kubo, ukuba banamathuba ekufumaneni umntu obambisene izimvo kunye nomdla wakho lwapheliswa nezo zingayifumaniyo. Xa udibana indoda okanye ibhinqa bar, ukuba akukho ndlela zokubalisa yasekunene ngophini ukuba zamaKristu okanye silwe, fan yi San Diego setshaja okanye ukuba bacinga ukuba webhola ngumdlalo zobundlobongela. Ngokusebenzisa imisebenzi uphendlo nokuyicoca kwiinkonzo ukuthandana intanethi ukuchonga profiles yematshisi ezinokwenzeka, ungayiphelisa ixesha elichithwa ujonga ngapha profiles zabantu ukuba musa ukwabelana umdla yakho.
3. Info Personal Ngaba Hlala Private
Into olukhulu malunga ukuthandana Intanethi ukungaziwa yayo. Xa ngokuqala zoqhagamshelwano nomntu ziye zatsaleleka online, awuzukuba ukunika nayiphi informationÖnot buqu nokuba idilesi yemeyile yakho. Unako ukuthatha ixesha ukuze ngokwenene ukwazi umntu ngaphambi kokuba uxelele nabani ezifana nenombolo yefowuni yakho, Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zabantu yokuhlangana. Ukuba uthe waqubisana nomntu ngexesha uphuhlisa ndawo, unyanzelwe ukuba ndiphise inombolo yefowuni yakho ukuze sihlale zoqhagamshelwano, nokuba ukhe wadibana nje umntu kwaye andazi ngokwaneleyo ngaye okanye ukwazi ukuba ne ezintle.
4. Uloyiko endandinalo ingancitshiswa
Ukuba ugqiba ukuba uqhagamshelane nomntu nangona email uyakwazi ukuthatha ixesha ngokwenene ukucwangcisa into ofuna ukuyithetha loo mntu ukuthandana online. Ukuba ubona umntu kulo lonke igumbi uzame ukusondela kubo, amaxesha luvo nokudana uyakwazi ukufumana eyona kuni. Usenokuba kucetywa ukuba yintoni wena ukuthi, kodwa xa sisondela konke inqamla enomdla ephuma emlonyeni wakho. Ukuthandana intanethi ungahlala phantsi kwaye ucinge email yakho, ukuyifunda amaxesha isibini, kwaye uyithumele nisazi ukuba uchazile wena ku kangangoko unakho. Akude zentlalo ukuba unako ukuza kunye nokuthetha nomntu kubhabho kwi umntu wazivala.
5. Yinto Lowo kumava omnye
Xa bar, iklabhu, Ivenkile yekofu, okanye ezinye uphuhlisa zemveli yokuhlangana ndawo, ayikhankanyi ukuba yenze unxulumano lobuqu umntu unomdla. Kukho ukhuphiswano esebenzayo ingqalelo kwezi ndibano zentlalo kunye omnye intsebenziswano elinye kunokuba nzima kakhulu ukuza ngokuthi. Ukuthandana online ilungile yobuqu ukususela ekuqaleni. ukunxibelelana ukuba umntu omnye incoko imeyile yabucala kunye nomntu onomdla wayo kwaye bayakwazi ukwenza uqhagamshelo yobuqu yasekunene ngephini, kunokuba ukukhuphisana kwigumbi epheleleyo yesinye guys abangatshatanga gals zonke ngenxa injongo efanayo.
Kuba uphuhlisa wondla kunye rhandzana scene zemveli, nokukhangela utshintsho, ukuthandana online isenokuba indlela ukuya. Unako ukuhlangabezana abantu ngakumbi izinto ezifanayo awafane inkcazelo yobuqu kwaye, xa ufumana iprofayile ogqibeleleyo, uyakwazi ukwenza uxhulumaniso yobuqu ekhawulezileyo. Oko kuwufunale itrayi.